Muna 1831 Michael Faraday akawana Electromagnetic induction heat. The basic nheyo yekudzidzira kupisa inzira yakashandiswa yekuwanikwa kwaFaraday. Icho chokwadi ndechekuti, AC ikozvino inoyerera kuburikidza nedunhu inokanganisa mafambiro emagetsi echipiri chedunhu riri pedyo nayo. Kuchinja-chinja kwezvino mukati medunhu rekutanga kwakapa mhinduro yekuti zvisinganzwisisike zvazvino zvinogadzirwa sei munharaunda yechipiri yakavakidzana. Kuwanikwa kwaFaraday kwakakonzera kugadzirwa kwemagetsi emagetsi, majenereta, matransformer, uye michina yekutaurirana isina waya.Kushandiswa kwayo, zvisinei, kwave kusina kukanganisa. Kurasikirwa nekupisa, kunoitika panguva yekupisa yekupisa, kwaive kushamisa kwemusoro kunokanganisa kushanda kwese kwehurongwa. Vatsvaguri vakatsvaga kudzikisira kurasikirwa nekupisa nekumisa magineti mafuremu akaiswa mukati memota kana transformer.
Kurasikirwa nekupisa, kunoitika mukugadzirwa kweelectromagnetic induction, kunogona kushandurwa kuita simba rekupisa rinogadzira mugadziriro yemagetsi nekushandisa mutemo uyu. Maindasitiri mazhinji akabatsirikana kubva mukubudirira kutsva uku nekushandisa induction heat.
Categories Technologies Tags electromagnetic induction, electromagnetic induction basic, remagetsi induction hita, electromagnetic induction heat, electromagnetic induction kudziyisa system, remagetsi induction musimboti, electromagnetic induction theory Post navigation